Atari Greatest Hits mamela anao misintona ny lalao 100 maimaim-poana (anio ihany) | Vaovao IPhone
Atari Greatest Hits mamela anao misintona ny lalao 100 maimaim-poana (anio ihany)
Feno 40 taona Atari ary te hankalaza ny tsingerin-taonany miaraka amin'ireo mpampiasa rehetra izy. Noho izany, afaka anio ianao misintona ny lalao 100 rehetra avy amin'ny sehatra Atari Greatest Hits maimaim-poana fa tsy mila mandoa 7,99 euro.
Ny asan'ny fampidinana ireo lalao dia somary mankaleo ihany satria tsy misy fonosana izay ahitana ny setin'ny lalao 100 fa kosa mila misintona azy ireo amin'ny tanana sy amin'ny tsirairay isika. Raha tsy liana amin'ilay 100 ianao dia ampidino ireo izay tena tianao indrindra.
Tadidio fa ny Atarizy Classics dia lalao indrindra Arcade sy 70s sy 80s koa aza manantena sary lehibe na zavatra toy izany. Ny momba ny fahatsiarovana ireo lalao video voalohany nanjary mazava sy ny antony handavana azy, na dia eo aza ny fahatsorany, maro amin'izy ireo no tsara kokoa noho ireo izay hitantsika amin'ny konsol ankehitriny.
Ny lafy ratsy dia tsy manana fifehezana ara-batana hankafizany azy ireo araka ny tokony ho izy, na dia izany aza raha manana iCade ianao na mitovy aminy, vintana ianao.
Fanazavana fanampiny - Atari Arcade ho an'ny iPad dia misy izao
Loharano - iSpazio
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Atari Greatest Hits mamela anao misintona ny lalao 100 maimaim-poana (anio ihany)
Astur_gv dia hoy izy:
Tsara izany fa fantatrao ve raha mijanona toy ny voavidy mandritra ny fotoana tsy voafetra izy ireo na raha mamafa ny rindranasa sy mametaka azy ianao dia tsy mandeha intsony?
Mamaly an'i Astur_gv
Tena tsy fantatro izany. Ny azy ireo dia toa voavidy izy ireo saingy tsy azoko hamafisina izany. Mirary ny soa indrindra
JoseCuen dia hoy izy:
Raha esorina ny rindranasa dia tonga ny fotoana fampidinana ireo lalao any aoriana. Miaraka amin'ny Datadeposit isika dia afaka manao kopia backup ary manana mandrakizay ireo lalao alaina maimaimpoana anio. Amin'izao fotoana izao dia miasa ho ahy….
Valiny tamin'i JoseCuen
Mamorona tapakila fitsapana ho an'ny Passbook maimaim-poana
Valiny haingana ho an'ny Whatsapp: valio ireo hafatra WhatsApp avy amin'ny efijery hidin-trano (Cydia)